LO: Waa in shaqo loo damaanadqaadaa dhammaan dhallinyarada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
LO: Waa in shaqo loo damaanadqaadaa dhammaan dhallinyarada
La daabacay måndag 17 juni 2013 kl 16.34
Waxaa qoraal ay soo saartay dalladda ururada shaqaalaha oo loo soo gaabiyo LO qortay in halkii shaqo ee xilliga kulaylaha ay ku soo aadeyso 22 qof. Taasina ay keeneyso in dhallinyaro badan ay bannaanka ka joogaan suuqa shaqada.
Waxaa hadda dalka ku nool dhallinyaro gaareysa 1,2 milyan oo qof oo da’doodu u dhexeyso 15 ilaa 24 sano. Waxaana xafiiska shaqada ka diiwaangeshan 55 000 shaqo xilliga kulaylaha. Taas micneheedu yahay in halkii shaqaba ay ku soo aadeyso 22 dhallinyaro ah.
Sidaas awgeed ayuu hadda ururka shaqaaluhu ugu baaqayaa dhammaan degmooyinka dalka in ay dhallinyarada u damaanadqaadaan shaqooyin xilliga kulaylaha. Tobias Baudin oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee LO ayaa arrintaan ka yiri:
- Waa in ay dhallinyarada u damaanadqaadaan shaqooyin xilliga kulaylaha, haba ugu yaraatee saddex toddobaad. Waana tallaabo fudud oo waaqici ah oo mustaqbalka horseedi karta in la dhimo shaqala’aanta ka dhexjirta dhallinyarada.